Europe's Top Luxurious Trains | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > युरोप शीर्ष शानदार गाडिहरु
तपाईं वास्तवमा यी को भित्र हेर्न बलिउड अभिनेता हुन छैन सुन्दर, शानदार रेल, तर तपाईंले तिनीहरूलाई रमाइलो गर्न तर्फ मुद्रा को एक hefty बाक्लो टुक्रा सेट गर्न छ. तपाईं भयो भने लगभग £ 3, 000+ छोडूँगा गर्न, गन्तव्य छनौट, आफ्नो सामानहरू प्याक गर्नुहोस्, र जीवनभरको यो अनुभव सुरू गरौं! लक्जरी को यो मिश्रण बारेमा सबै कुरा, सान्त्वना, र धेरै धेरै युरोप मा सुंदर पर्यटन एक अविस्मरणीय अनुभव लागि गर्नेछ.
यहाँ युरोप तीन लोकप्रिय गर्न पुस्तिका छ, शानदार रेल.
भेनिस Simplon पूर्वी एक्सप्रेस
फिर्ता यात्री रेल फिजूलखर्ची को दुनिया गर्न शुरू कि एक रेल 1982 उही ट्रेन यही हो जुन धेरै यूरोप यात्री र लक्जरी ट्रेन फ्यानहरूको नम्बर एक विकल्प हो. त्यसैले, तुलना भन्दा पर ट्रेन लक्जरीको आनन्द लिन को लागी कसैको लागि, भेनिस Simplon पूर्वी एक्सप्रेस यो गर्न बाटो छ. सबैभन्दा प्रसिद्ध यात्रा यो शानदार भाग्ने को लन्डन र भेनिस बीच छ. तथापि, धेरै इस्तानबुल र बर्लिन गर्न थप जाँदै प्रतिरोध गर्न सक्दैन, संग बर्लिन अन्तिम शुरू स्टप रहेको रेल लागि. जब तपाईं यस रेलमा सवारी गर्नुहुन्छ, तपाईं कि 5-तारे सामाग्री संसारको सर्वश्रेष्ठ शेफ आफ्नो भोजन र एकल र साझेदारी सुइट्स मा काम केही.
रेस्टुरा कार र मौज साथ, त्यहाँ अतिथि ... khm लागि राम्ररी टन्न भरेर पट्टी क्षेत्र, यात्री. जब तपाईं शानदार रेल को crème डे ला crème लाग्छ, जहाँ आफ्नो मन तुरुन्तै जान्छ भेनिस Simplon पूर्वी एक्सप्रेस छ!
भेनिस गर्न लन्डन टिकट तपाईं खर्च हुनेछ लगभग 2,700 £. सवारी केही लिन्छ 16 घण्टा.
Belmond शाही Scotsman शानदार गाडिहरु
साँच्चै शाही परम्परा सम्म बसोबास गर्ने एक रेल, बेल्मन्ड रोयल स्कट्सम्यान एक हो सपना साकार हुनु. शीर्ष बीचमा रहेको3शानदार रेल, Belmond तपाईंलाई मनपर्ने छौँ मार्गहरू थिम्ड छ. यी समावेश स्कच MALT व्हिस्की ट्रेल, पश्चिमी दर्शनीय आश्चर्य, स्कटल्याण्ड गरेको क्लासिक Splendours, Dales पोखरी & उद्यान, र अधिक धेरै. Belmond स्पा सेवा को दावा, साथै! 4-दिन हाइल्यान्ड Classicmost लोकप्रिय भ्रमण छ. रेल देखि चल्छ अप्रिल अक्टोबर गर्न, र यो धेरै बिल्कुल भव्य सुंदर परिदृश्य समेट्छ, Skye को आइल सहित. फिर्ता बस्न र विशाल ग्लास Windows द्वारा आराम, को केही मा SIP सर्वश्रेष्ठ वाइन र स्कटल्याण्ड छ कि सौन्दर्य भन्दा gush.
टिकट मूल्य प्रति व्यक्ति £ 2.350 मा सुरु.
गोल्डन ईगल डेन्यूब एक्सप्रेस लक्जरी ट्रेनहरू
के तपाईं सुनौलो ईगल डेन्यूब एक्सप्रेस साथ यात्रा थियो तरिकामा युरोप कहिल्यै अनुभव छौँ. रेल आश्चर्यजनक शानदार सुइट्स मा prides, डिलक्स र सम्पदाको केबिन. तिनीहरूले पनि पाङ्ग्रा मा सबै भन्दा राम्रो रेस्टुरेन्ट र बार मौज आवास को घमण्ड. सबैभन्दा को टाढा एक द्वारा शानदार रेल के तपाईं कहिल्यै मा स्वर्ण ईगल डेन्यूब एक्सप्रेस प्रस्ताव सवारी छौँ5गर्न 12 दिन 'यात्राको. यसलाई कवर एक बुडापेस्ट सहित गन्तव्यहरू संख्या, प्राग, ज्यूरिख, भियना, भेनिस, इस्तानबुल, नाइस, सोफिया, र अरु धेरै. त्यहाँ अन्य गन्तव्यहरू प्रशस्त पनि छन् (पर्यटन) छनौट गर्न. सबै सुनको ईगल डेन्यूब एक्सप्रेस यात्राको बन्द-रेल पर्यटन र अनुभव समावेश.
उच्च डिलक्स क्लास लागि £ 22.260 यो एक सुरू लागि टिकट.
युरोपको यात्रामा विलासी ट्रेनहरू र यसको आफ्नै आनन्दमा पहिले नै समावेश छ, तर यी कुनै पनि ट्रेनहरूमा युरोपको यात्रा सबै कुरा हो. कुनै पनि ट्रेन सवारीका लागि टिकट किन्नुहोस् बिन्दु देखि विन्दू सम्म एक ट्रेन सेव र युरोप को आनंद सुरु.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ सक्छन्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-luxurious-trains%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#महँगो #शानदार #traveleurope लक्जरीट्रेन रेल यात्रा रेल यात्रा